TAONA VAOVAO 2017 – Fifampiarahabana Tratry ny Taona
Ny alatsinainy 2 Janoary lasa teo dia nosantarin’ ny mpiara-miasa teto anivon’ ny DGCF tamin’ ny fiarahabana ny Tale Jeneraly Andriamatoa RAOELIJAONA Bien Aimé, ny taona vaovao 2017.
Ankoatry ny firarian-tsoa nisoloan’ i Andriamatoa RAMANANJARA Ndriatsarafara izay filohan’ ny FIkambanan’ny Mpiara-miasa eto amin’ny FAnaraha-maso ny Volam-panjakana tena ny mpiara-miasa rehetra, na ny avy eto anivony na ny avy any amin’ny faritra, dia nisy ny fanolorana solombodiakoho ho an’ ny Tale Jeneraly.
Nandritra ny lahateny nataony, dia tsy nanadino nisaotra ary namerina ny firarian-tsoa tamin’ireo mpiara- miasa aminy ny Tale Jeneraly Andriamatoa RAOELIJAONA Bien Aimé. Anisan’ ny nisongadina tamin’ ny lahateny nataony ihany koa ny fanoritsoritana sahady ny fifandaminana hapetraka eto amin’ ny Contrôle Financier manomboka amin’ ity taona 2017 ity.
Marihina moa fa dia mbola hisy ny fotoana manokana hiaraha-mikorana ka handraisan’ireo mpiara-miasa avy any amin’ny faritra rehetra anjara mivantana. Ny zoma 13 Janoary 2017 kosa no notanterahina teny amin’ny ‘Site MFB Andranovelona’ ny fifampiarahabana tratry ny taona vaovao teto anivon’ny Ministeran’ny Fitantanan-mbola sy ny Tetibola.
Fotoana manokana niarahaban’ny mpiara-miasa rehetra eto amin’ny Minisitera ny Minisitra Andriamatoa RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais sy ny vadiny ihany koa io andro io, sady nanolorana solombodiakoho ho azy ireo.
Nandray anjara mavitrika tamin’ny alalan’ny hira ny avy eto amin’ny DGCF nandritra izany fotoan-dehibe izany.
Izay azonao arahina an-tsary toy izao manaraka izao …